Qorshe ka qarsanaa Deni iyo Madoobe oo bannaanka yimid | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshe ka qarsanaa Deni iyo Madoobe oo bannaanka yimid
Deni iyo Farmaajo oo dhabarka ka wareemay mucaaradka Muqdisho jooga oo ay muddo ku jireen saf siyaasadeed ayaa ku baraarugay qorshe hore u qarsoonaa oo ku qasbi doona in ay aqoonsiga kala laabtaan Guddiga Xallinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Xallinta Khilaafaadka doorashooyinka Dadban [GXKHDD] ayaa muddo dheer kadib shalay ku dhawaaqay in doorashada kursiga sumaddiisu tahay Hop-067, loo maray habraac rasmi ah, taas oo bannaanka keentay qorshe qarsoon oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin u dajiyeen kuraasta ay ku soo baxaan shaqsiyaadka aysan rabin.
Habdhaqanka dhaca iyo boobka kuraasta, wuxuu ahaa mid cad, waana lagu baraarugsanaa in guddiga Fahad qoray uusan marnaba noqon doonin dhexdhexaad hirgaliya hannaan loo siman yahay, hayeeshee, tallaabadii lagu xalaaleeyay xildhibaannimada eedeysane Yaasiin Farey, waxa ay daboolka ka qaadday qorshe loogu awood sheegan doono horjoogayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Saciid Deni, oo ka mid ah musharixiinta xilka Madaxweynaha, oo si buuxda kaga madax-bannaan faragalinta Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo horjoogaha Puntland, kala shaqeynaya tartanka kursiga 1-aad ee dalka, ayaa hore u boobay dhamaan kuraasta Aqalka sare, hayeeshee, boobka ay u qorsheeyeen kuraasta Golaha Shacabka waxaa hor istaagi doona [GXKHDD].
Guddiga Xallinta Khilaafaadka, wuxuu Farmaajo, u fasixi doonaa dhamaan kuraasta isaga loogu boobay, Galmudug, Hirshabeelle, Koofur galbeed iyo Banaadir, taas baddelkeda, wuxuu laali doonaa kuraasta ay Madoobe iyo Deni, ku boobaan Kismaayo iyo Garowe, taas oo sababi doonta in Puntland iyo Jubbaland ku dhawaaqaan in aysan aqoonsaneyn [GXKHDD].
Damaca Dani ee xilka Madaxweynaha, wuxuu keenay in horjoogaha Puntland, uu ballamo siyaasadeed kaga baxo mucaaradka Muqdisho jooga, kuwaas oo hadda u muuqda in ay kala firxadeen, kadib markii shaqsigii guddoomiyaha u ahaa [Shariif] taageeray hannaanka Farmaajo loogu boobayo kuraasta baarlamaanka 11-aad.
Madoobe iyo Deni, waxa ay ka horyimaadeen soo jeedinta xubnaha aragtida toolmoon ee ku jira Midowga Musharixiinta, ee ku aaddan in la hakiyo boobka kuraasta, lana qabto shir weyne loo dhan yahay oo lagu saxayo hannaanka hadda wax ku socdaan, yeelkeede, waxaa muuqta ifafaalo ay mar kale u dalban doonaan is-xulufeysigii mucaaradka ku sugan Caasimadda.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayaan ilaa hadda ka hadlin go’aanka ka soo baxay, Guddiga Xallinta Khilaafaadka, oo Yaasiin ka sokow, ogolaaday in sanadkaan Golaha shacabka galaan Fahad Yaasiin iyo Kullane Jiis, oo ah eedeysanayaal gabood-fallo xooggan ka geystay dalka shanti sano ee la soo dhaafay.
Saadaasha Keydmedia Online;
Guddiga Xallinta, wuxuu ansixin doonaa natijada kursi kasta oo Farmaajo loo boobo, halka uu laali doono dhamaan kuraasta loo dhaco shaqsiyaadka mucaaradka ku ah.